Blog Statistics	Total Visitors: 258362
Author Archive 23 Apr 2017
EMMC DL အသုံးပြုပြီး Mi Account Bypass ပြုလုပ်နည်း
Mobile Tool များ, Window PC သုံး Software များ, ဗဟုသုတများ, သတင်းများ
emmcdl.exe ကို အသုံးပြုပြီး Mi Account Bypass လုပ်လို့ရနိုင်ပါတယ်။ Account တော့လုံးလုံးမပြုတ်ဘူးပေါ့. MiUI7နဲ့အောက်ပိုင်းတွေမှာပေါ့ အဆင်ပြေတာများတယ် MIUI 8 နဲ့ အထက်တွေမှာတော့ Internet ဖွင့်လိုက်ရင်ပြန်ကျတာတွေဖြစ်တက်ပါတယ် ပထမဆုံးလိုအပ်တာကို Download ရယူပါ Mi Account By Pass ပြီးရင် Zip ဖြည်လိုက်ပါ။ အဲ့ Zip ဖိုင်လေးမှာ emmcdl.exe လေးပါတာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ ဒါလေးကို အသုံးပြုပြီး Bypass လုပ်ရမှာပါ. Mi5 ကို လုပ်ချင်ရင် Mi5 Folder ထဲကို emmc dl လေးကူးထည့်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် အဲ့ Folder ထဲဝင်ပြီး Cmd ဖွင့်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် Qualcomm 9008 ထဲဝင်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် Device	Read More
Y560-L01 Qualcomm 9008 Firmware (Cm2 Dongle Backup)
Firmware များ, Huawei Firmware များ
Cm2 Dongle နဲ့ Backup ယူထားတာလေးပါ. Qualcom 9008 Mode ကနေ Firmware တင်လို့အဆင်ပြေပါတယ်. ဒီမှာ Download ရယူပါ။ Y560-L01 Qualcomm 9008 Firmware	Read More
LAVA 4G iris 750 FRP Unlock File
Lava 4G iris 750 တွေ Frp ကျနေရင် ဒီဖိုင်လေးကို Sp Flash Tool ကနေ ရေးလိုက်ပါ။ Frp ပြုတ်သွားပါလိမ့်မယ် Download Here	Read More
Thai ဖုန်းတွေဖြစ်တဲ့ Lava,True အစရှိတဲ့ ဖုန်းများအတွက် Network Unlock ဖိုင်များ
Thai ဖုန်းတွေဖြစ်တဲ့ Lava,True အစရှိတဲ့ ဖုန်းတွေအတွက် Network Unlock ဖိုင်များကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ပါဝါတဲ့ Model တွေကတော့ အောက်မှာ ပုံလေးတွေနဲ့ပြပေးထားပါတယ် ကြည့်ပြီး Download ရယူပါ။ Download Here	Read More
S7 Edge Au (SCV33) Temp Network Unlock ပြုလုပ်နည်း
Firmware များ, Samsung Firmware များ, ဗဟုသုတများ, သတင်းများ
ဒီ Solution ကတော့ ဗီယက်နမ် Developer Manit ရဲ့ အရင်ကရောင်းစားနေတဲ့ Solution လေးပါ. သူ့ရောင်းချတဲ့ ဈေးက $150 ၀န်းကျင်ပါ. အခုတော့ သူပဲ Free ပေးလိုက်ပါပြီ။ ပထမဆုံး ဒီ Firmware လေးကို Download ရယူပါ။ https://drive.google.com/file/d/0B40ItdHKfkyQWkJoTjdBcU1iUjQ/view Zip Password – cmb_ManhIT_SCV33 @) 16 ပြီးရင် Odin ကနေ Ap မှာထည့်ပြီး Flash လုပ်လိုက်ပါ။ Flash ပြီးတာနဲ့ Recovery Mode ၀င်ပြီး Wipe Data လုပ်လိုက်ပါ ဒါဆိုရပါပြီ။ ဒါဆိုရင်အဆင်ပြေပါပြီ 🙂 Read More
Huawei Y5II Firmware(CUN-U29 Flash Tool Firmware)
Y5ii CUN-U29 တွေ အတွက် Sp Flash Tool ရဲ့ Firmware ပြန်တင်နိုင်တဲ့ Rom လေးပါ။ ရှားပါးလေးနော်. အရင်က M-tech.me မှာတင်ပေးထားတာလေး အခု Regeneration မှာတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ Mediafire ကနေတင်ပေးလိုက်ပါတယ်.အောက်မှာ Download ရယူပါ။ Download Here	Read More
1234Next ›Last »	Facebook Live Traffic Stats